décembre 2016 – filazantsaramada
MAMIRAPIRATRA AO AMIN’NY MAIZINA NY MAZAVA
« Hamirapiratra amin’izay mipetraka ao amin’ny maizina sy ao amin’ny aloky ny fahafatesana. » Lioka 1:79a Faminaniana nataon’i Zakaria io teny io raha vao nisokatra ny vavany. Moana izy noho ny tsy finoany ilay anjely nilaza taminy fa hiteraka Elizabeta vadiny izay momba. Tonga ho vavolombelona hanambara ny mazava i Jaona. Fa tsy I Jaona anefa no […]
Publié parfilazantsaramada décembre 31, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MAMIRAPIRATRA AO AMIN’NY MAIZINA NY MAZAVA
Horonan-tsarimihetsika ho fankalazana ny Krismasy 2016
Sampana Lehilahy Kristiana, FJKM Sabotsy Namehana Ho fanombohana ny fankalazana ny Krismasy, ny Sampana Lehilahy kristiana (SLK) ao amin’ny FJKM Sabotsy Namehana Atsinanantsena dia nangataka fiaraha-miasa tamin’ny Feon’ny Filazantsara amin’ny alalan’ny fandefasana Horonan-tsarimihetsika. Koa ny Alahady 11 Desambra 2016 dia nanasa ireo Kristiana sy ny manodidina ny Filohan’ny Sampana sy ireo mpiara-miasa aminy hijery ny […]
Publié parfilazantsaramada décembre 29, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Horonan-tsarimihetsika ho fankalazana ny Krismasy 2016
FIAINANA SA FAHATEZERANA?
« Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay; fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran’Andriamanitra no mitoetra eo aminy. » Jaona 3:36 Ahoana tokoa no hahatongavan’ny finoantsika an’i Jesosy Kristy? Isika mbola tsy nahita Azy. Ny toriteny henontsika, sy ny Soratra Masina vakintsika, ny Soratra Masina rentsika, ny fanasitranana, ny fahagagàna […]
Publié parfilazantsaramada décembre 23, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FIAINANA SA FAHATEZERANA?
FLM Toby Soatanana Ilafy
“Aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo” Lioka 12:35 Mankalaza ny Advento isika izao alohan’ny Krismasy izao, izay manambara ny tokony hiomanantsika ka hananantsika fahavononana mandrakariva amin’ny fihavian’ny Tompo. Tsapa anefa fa toa miha matimaty, tsy mangatsiaka, tsy mafana ny finoan’ny Kristiana amin’izao fotoana izao. Noho ny fahatsapàna izany, Rtoa Diamamondra izay “Volontaire FF” […]
Publié parfilazantsaramada décembre 21, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FLM Toby Soatanana Ilafy
NY FEO MIANTSO ANY AN’EFITRA
« Injany! misy feon’ny miantso mafy any an’efitra hoe: amboary ny làlan’i Jehovah, ataovy mahitsy ny làlan-kalehany. » (Lioka 3:4) Aiza ny làlan’i Jehovah amboarina? Làlan-kalehany aiza no atao mahitsy? I Jaona Mpanao Batisa no ilay nialoha làlana an’i Jesosy. Nampibebaka ny olona izy mba handraisan’ny maro an’i Jesosy. Misy ny mikitaontaona sarotra aleha, ka mila amboarina […]
Publié parfilazantsaramada décembre 16, 2016 décembre 15, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FEO MIANTSO ANY AN’EFITRA
Fandaharanasa ho an’ny Tanora
Sekoly ambony ISPPS: Famoahana ireo mpianatra andiany faharoa Tsy mionona amin’ny fiaraha-miasa amin’ny Fiangonana ihany ny asa fitoriana ny Filazantsara ataon’ny Feon’ny Filazantsara (FF) fa dia mahenika ny Ivontoerana maro. Anisan’ireny ny Sekoly Ambony Institut Supérieur des Paramédicaux et Promotion de la Santé (ISPPS) izay manana Sekoly amin’ny Faritra roa (Antananarivo/Toliara). Nanasa ny solon-tenan’ny FF […]
Publié parfilazantsaramada décembre 14, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fandaharanasa ho an’ny Tanora
Alahadin’ny Zanaka am-pielezana FJKM Ambohibary Zoara (SPAA 12)
Ho tahiana izay ankohonana manana an’i Jehovah ho Andriamaniny Isaky ny Alahady faha-telon’ny volana no Alahadin’ny Zanaka am-pielezan’ ny FJKM Ambohibary Zoara izay iandraiketan’Atoa Ratsimbazafy Mpitandrina. Ao amin’ny Sekoly FJKM Soamanandrariny no anatanterahana ny fotoam-pivavahana isam-potoana. Ny volana Novambra lasa teo, toy ny fanao dia tonga nitarika ny fanompoam-pivavahana ny raiamandreny Mpitandrina, izay nanasa ny […]
Publié parfilazantsaramada décembre 9, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Alahadin’ny Zanaka am-pielezana FJKM Ambohibary Zoara (SPAA 12)
« NY ANARANY ATAONAO HOE JESOSY. »
Tenin’ny anjely tamin’i Maria io. “Ary hoy ilay anjely taminy: Aza matahotra, ry Maria, fa efa nahita fitia tamin’Andriamanitra hianao. Ary, indro, hitoe-jaza hianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia hataonao hoe JESOSY.” (Lioka 1:30,31). Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany. Fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona […]
Publié parfilazantsaramada décembre 9, 2016 décembre 8, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur « NY ANARANY ATAONAO HOE JESOSY. »
NY FIANDRASANA AN’I JESOSY
Misy karazany roa ny fiandrasana an’i Jesosy: Fiandrasana ny fihaviany voalohany, ary ny fiandrasana ny fihaviany faharoa. « Indro, efa mitsangana eo ambaravarana Aho ka mandondona; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. » Apokalypsy 3:20 – 1/ Ny fihaviany voalohany dia efa tanteraka, […]
Publié parfilazantsaramada décembre 2, 2016 décembre 1, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FIANDRASANA AN’I JESOSY